ဝါခေါင်မိုး: ဒွာ ဒသမ ရတု
Posted by မအိမ်သူ at 11:25 PM
မအိမ်သူတို့ မောင်နှံနှစ်ဖြာ ...
ဆက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေသား ... ။
၁၂ နှစ်မှသည် ရတုများစွာတိုင် တွဲလက်တွေ ခိုင်မြဲပါစေလို့ တောင်းဆုပြုခဲ့ပါတယ်ဗျာ...။
October 01, 2012 1:52 AM
ရိုးမြေကျ ချမ်းမြေ့ သာယာသော ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ပါစေဗျား
၁၂နှစ်မှသည် နှစ်၁၂၀ တိုင်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါသည်. အစ်မ အိမ်သူ
နေ့ရက်တိုင်း စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာ ချမ်းသာစွာနဲ့ မိသားစုနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ.
၁၂ နှစ်မှ နောင်နှစ်ပေါင်များစွာတိုင်စေသော်
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ရွှေလက်တွဲလို့ မြဲမြဲခိုင်ပါစေ။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သာယာတဲ့ ဘဝခရီးလမ်းကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေရှင်။
ရတု အဆက်ဆက် တွဲလက်တွေမြဲစွာနဲ့ ပျော်ရွှင်ကြပါစေကြောင်းး)))
October 04, 2012 1:08 PM
၁၂မှသည် ရတုများစွာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ဘလော့ဂင်းနိုင်ပါစေဗျာ..
ယနေ့မှစ ချစ်ခြင်း၊ စာနာခြင်း၊ မေတ္တာများစွာထြင့် နှစ်တစ်ရာတိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ချွေခဲ့ပါတယ်..